स्वास्थ/ शिक्षा Archives - Jhapa Times
मुख्य स्वास्थ/ शिक्षा
दुई हजारभन्दा बढीमा सङ्क्रमण
Post date २१ असार २०७८, सोमबार २०:२३
No Comments on दुई हजारभन्दा बढीमा सङ्क्रमण
पछिल्लो समय नेपालमा आज थप दुई हजार ६२२ मा कोभिड–१९ सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सात हजार ४९९ नमूनाको पिसीआर परीक्षण गर्दा एक हजार ७४५ र चार हजार २८ एन्टिजेन परीक्षण गर्दा ८७७ गरी दुई हजार ६२२ मा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको हो ।
हालसम्म छ लाख ११ हजार ४२९ कोभिड–१९ बाट मुक्तभई घर फर्किएका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर दुई हजार २११ सङ्क्रमित निको भएर घर फर्किएका छन् । हाल देशभर रहेका २५ हजार ६९० सक्रिय सङ्क्रमितमध्ये २२ हजार ९९८ होम आइसोलेशनमा रहेका छन् । यस्तै संस्थागत आइसोलेशनमा दुई हजार ६९२ रहेका छन् । तीमध्ये ५७१ जनाको आइसियू र १८० को भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ । निको हुने दर ९४.६ रहेको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा ५६२ सङ्क्रमित
पछिल्लो २४ घण्टामा थपिएका सङ्क्रमितमध्ये ५६२ काठमाडौं उपत्यकाका हुन् । सोमा काठमाडौँका ३७८, ललितपुरका १२४ र भक्तपुरका ६० जना छन् ।
पछिल्लो समय नेपालमा कोभिड–१९ को सङ्क्रमणबाट थप २३ को मृत्यु भएको छ । योसँगै कोभिड–१९ को सङ्क्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या नौ हजार २४८ पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
Post date १६ जेष्ठ २०७८, आईतवार १३:४३
No Comments on ‘१० दिने पर्यटन काज शिक्षकहरुका लागि पनि हो’: शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले पर्यटन काज शिक्षकहरुका लागि पनि भएको स्पष्ट पारेका छन् ।
कतिपय शिक्षकका पेसागत संघसंस्थाहरुले बजेटमा उल्लेख गरिएको पर्यटन काजमा शिक्षकहरुलाई नसमेटिएको भनेर विरोध सुरु गरेका बेला शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले शिक्षकहरुलाई भ्रममा नरहन आग्रह गरेका हुन् ।
Post date १७ बैशाख २०७८, शुक्रबार २२:१७
No Comments on झापामा आइतबारदेखि एक साता निषेधाज्ञा, के के मा लाग्यो बन्देज ? (सुचना सहित )
गाैरादह / कोभिड १९ को संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दै गए पछि भारत संग सिमा जोडिएको झापामा आइतबारदेखि जिल्लाभर निषेधाज्ञा लागू हुने भएको छ।
शुक्रवार झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमिल्सिनाद्वारा जारी आदेशमा आइतबार राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी एक साता लामो निषेधाज्ञा लगाउने उल्लेख छ ।
उनका अनुसार बैशाख २६ गतेसम्म आंशिक रुपमा निषेधाज्ञा लागू हुनेछ।
Post date १५ बैशाख २०७८, बुधबार १६:४०
No Comments on झापाका सबै शैक्षिक संस्थाहरु बैशाख मसान्तसम्म बन्द
झापा / झापाका शैक्षिक संस्थाहरू बैशाख समान्तसम्म बन्द हुने भएको छ । जिल्ला कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डिसिसिएमसी) झापाले जिल्लाका सबै शैक्षिक संस्था वैशाख मसान्तसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो।
दोस्रो लहरको कोरोना भाइरसको संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिसकेको भन्दै त्यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा सोमबार बसेको डिसिसिएमसीको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमिल्सिनाले बताए।
झापाका ४६ सयले लगाए कोरोना विरुद्धको खोप
Post date २६ माघ २०७७, सोमबार १९:१०
No Comments on झापाका ४६ सयले लगाए कोरोना विरुद्धको खोप
बिर्तामोड । झापामा कोरोना विरुद्धको पहिलो चरणको खोप कार्यक्रम सकिएको छ । स्वास्थ्य कार्यालय झापाका अनुसार अब दोस्रो चरणको खोप कार्यक्रम तयारी गरिदैंछ ।
पहिलो चरणमा झापाका ४ हजार ६ सय २१ जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको फोकल पर्सन जीवन चौलागाईले जानकारी दिए । उनले पहिलो चरणमा खोप लगाउनेहरुमा कुनै समस्या नदेखिएको बताए । जिल्लाको ३ वटा केन्द्रमा खोप लगाइएको चौलागाईको भनाई छ । उनका अनुसार मेची अस्पताल भद्रपुर , अनारमनी नगर अस्पताल बिर्तामोड र दमक अस्पतालबाट खोप लगाइएको थियो । स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाई कर्मचारी, एम्बुलेन्स चालक, शव वाहनका चालकलाई पहिलो चरणमा खोप लगाइएको चौलागाईले जानकारी दिएका छन् ।
दोस्रो चरणको खोप चाडैं लगाइन्छ, इजलाससित कुरा गर्दै चौलागाईले भने – अब कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई प्राथमिकतामा खोप लगाइने छ । खोप लगाउन नाम संकलन भइरहेको छ ।ईजालस अनलाईन
गौरादहका बुद्धिमान कार्की पेशागत महासंघको स्थायी कमिटी सदस्यमा चयन
Post date २५ माघ २०७७, आईतवार २२:३३
No Comments on गौरादहका बुद्धिमान कार्की पेशागत महासंघको स्थायी कमिटी सदस्यमा चयन
झापा । झापाको गौरादह – १ निवासी नेपाल शिक्षक महासंघ झापाका अध्यक्ष बुद्धिमान कार्की पेशागत महासंघको स्थायी समिति सदस्य चुनिनुभएको छ । आज सम्पन्न भेलाले उहाँलाई प्रदेश १ को सहसंयोजक समेत तोकेको छ ।
कार्की अखिल नेपाल शिक्षक संगठन प्रदेश १ का अध्यक्ष साथै गौरादहको जनता माविका पुर्व प्रध्यानाध्याक समेत हुनुहुन्छ । झापाकै देवराज कार्की महासंघको प्रदेश संयोजक तोकिनु भएको छ ।
गौरादह २ का मन्दिस लागुऔषध ब्राउनसुगर सहित पक्राउ
Post date २४ माघ २०७७, शनिबार ०६:२३
No Comments on गौरादह २ का मन्दिस लागुऔषध ब्राउनसुगर सहित पक्राउ
झापा । प्रतिबन्धित ब्राउन सुगर सहित गौरीगञ्ज ३ पानीट्याङ्की नजिकबाट एक युवा पक्राऊ परेका छन् ।
गौरादह नगरपालिका वार्ड नं. २ वर्ष २५ का मन्दिस अधिकारी ५ सय मिलीग्राम ब्राउन सुगरसहित पक्राउ पक्राउ परेका हुन् ।
विशेष सूचनाको आधारमा गौरीगंजबाट गौरादह तर्फ गईरहेको अवस्थामा हिजो विहिवार वेलुका करिब ४ बजे चेकजाँच गर्ने क्रममा गौरीगंज प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
उनको अदालतबाट म्याद थप गरि अनुसन्धान भईरहेको ईलाका प्रहरी कार्यालय गौरीगंजका प्रहरी निरीक्षक राकेश रेग्मीले जानकारी गराएका छन् ।